Fotodrafitrasa fototra : Mitohy ny asa fampandrosoana ny tanànan'i Toliara -
AccueilSongandinaFotodrafitrasa fototra : Mitohy ny asa fampandrosoana ny tanànan’i Toliara
Araka ny efa nambaran’ny Filoham-pirenena ombieny ombieny dia ny tanànan’i Toliara no atao fitaratra amin’ny fampandrosoana. Izany hoe fampandrosoana miainga eny ifotony. Ao anatin’izay indrindra dia mitohy ny asa entina hampandrosoana ny tanànan’i Toliara. Tafiditra amin’izany ny fametrahana andrin-jiro « béton armé » miisa 1003 mba hanazavana ny tanàna, izay famatsiam-bola avy amin’ny AFD na « agence française de développement ». Eo koa ny fanitarana ny tambazotra jiro mirefy 68km mba hanoloana ny efa ratsy. Ity kosa famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Aorian’izay vao omena ny orinasa Jiro sy rano malagasy na Jirama ny mametraka ny tariby sy ny zavatra rehetra mbola ilaina, izay hiarahana amin’ny orinasa Congelec, araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanànan’i Toliara, Rabehaja Jean.
Ao anatin’ny fampandrosoana miainga avy eny amin’ny vahoaka izay hatrany, dia misy koa etsy ankilan’izay ny fanamboaran-dalana entina hanakaikezana ny vahoaka. Lalana amin’ny fokontany efatra any an-toerana no vita « bitumage » amin’izao. Mizotra araka ny tokony ho izy kosa ny fanamboarana ny tsena ao an-tampon-tanànan’i Toliara. Izy io dia tafiditra ao anatin’ ny tetikasa Padev, vatsian’ny AFD vola mitentina 24 miliara Ariary. Kaomina telo eto Madagasikara no misitraka izany dia Antsiranana, Fianarantsoa ary Toliara. Ho an’ny Toliara dia ny tsenan’ny Bazar be sy ny lalana ao anatiny, Sakama ary Sanfily no tafiditra anatin’ ny fanamboarana. Mitohy kosa hoy ny ben’ny tanàna, Rabehaja Jean ny asa fanadiovana ny tanàna, izay hiarahana amin’ny fitondram-panjakana.
Isan’izany ny tetikasa drafitra fitantanana ny fanadiovana ny tanàna, izay vatsian’ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana. Kaomina 9 no voakasik’ity tetikasa ity, ka isan’izany Toliara ary hanomboka amin’ny aogositra izao. Ity tetikasa ity izay hanala ny fahasahiranan’i Toliara amin’ny tondra-drano rehefa mirotsaka ny orana noho izy tsisy lalana hivoahan’ny rano. Marihina fa manana fotodrafitrasa fitrohana rano miisa 3 fa tsy mahasehaka ny tanàna.